Fitaovana sivy an'ny surfactants cationic
1. Vokatry ny lena
Rehefa mifamatotra amin'ny ranoka ilay solid, dia manjavona ny interface mivaingana / gazy sy ranoka / entona ary mivaingana no miforona ny interface / solika vaovao. Ity dingana ity dia antsoina hoe mando. Ohatra, ny fibre lamba dia fitaovana misy poria manana velarana lehibe. Rehefa miparitaka manaraka ny fibre ny vahaolana dia hiditra ao amin'ny elanelana misy eo amin'ny kofehy izy io ary handroaka ny rivotra, hampiova ny fifandraisan'ny rivotra / fibre ho lasa mpiorina ranon-javatra / fibre. Izy io dia dingana mando mahazatra; raha hiditra amin'ny fibre amin'ny fotoana iray ny vahaolana, ity dingana ity dia antsoina hoe penetration. Ny surfactants izay manampy ny mando sy ny fidirana dia antsoina hoe agents mandatsa sy penetrants.
Ny emulsification dia manondro ranon-javatra roa tsy azo alaina (toy ny menaka sy rano), ny iray amin'izany dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fanaparitahana poti-tena kely (sombiny habe 10-8 ~ 10-5m) tao anaty ranoka hafa Ny anjara asan'ny emulsion. Ny vongan-tsolika miparitaka ao anaty rano dia antsoina hoe emulion-anaty-rano (O / W), ary ny vongan-drano miparitaka amin'ny menaka dia antsoina hoe emulsion-in-oil (W / O). Ny surfactants afaka manampy emulsification dia antsoina hoe emulsifiers. Ireo Suractactants ampiasaina ho emulsifiers dia manana asa roa: ny fanamafisana sy ny fiarovana.
Ny emulsifier dia misy fiatraikany amin'ny fampihenana ny fifanenjanana eo anelanelan'ny ranona roa hampiorina ny rafitra mifangaro. Izany dia satria rehefa miparitaka amin'ny sombin-javatra bitika kely ao anaty rano (na solika) ny solika (na ny menaka) dia mihalehibe ny faritry ny fifandraisana, ka miteraka fiakaran'ny herin'ny angovo sy ny fanjakana tsy milamina. Rehefa ampidirina emulsifier dia miparitaka eny ambonin'ireo potikan-tsolika solika ny vondrona lipofilika molekiola emulsifier raha mivelatra ao anaty rano kosa ny vondrona hydrophilic ary ampifanarahana amin'ny tampon'ny solika solika mba hamoronana sarimihetsika molekiola hydrofilika, izay mampihena ny fihenjanana eo anelanelan'ny solika / rano, izay mampihena ny haavon'ny angovo ao amin'ny rafitra ary mampihena ny fisarihana eo anelanelan'ny solika, manakana ny solika solika tsy hangonina ary hizara roa sosona indray.
Ny horonan-tsary molekiola mitodika noforonin'ny surfactant ambonin'ireo rano mitete solika dia sarimihetsika miaro matanjaka izay afaka manakana ny vongan-tsolika hidona sy hangonina. Raha horonantsary molekiola mitodika noforonina surfactant ionic izy, dia ampangaina amin'ny karazana fiampangana mitovy amin'izany ihany koa ny solika solika, izay hampitombo ny fifandonana sy hanakanana ireo solika solika tsy hangonina mandritra ny fifandonana matetika.
3. fanasana vokan'ny fanadiovana
Noho ny vokatry ny emulsification ny surfactant, ny poti-diloilo sy loto izay nesorina tamin'ny faritra matevina dia azo alain-tahaka sy haparitaka ao anaty vahaolana aqueous ary tsy hipetraka intsony amin'ny faritra nodiovina hananganana fandotoana indray.
Ny fizotry ny fanesorana menaka rano avy eto ambonin'ny dia voalaza etsy ambany mba hanehoana ny asan'ny surfactants. Tany am-boalohany nipoitra teo amin'ny sehatra matevina ireo tasy solika misy tsiranoka. Rehefa ampiana surfactants, noho ny fihenan'ny haavony ambany, dia miparitaka haingana amin'ny vovon-tsavony ilay vahaolana misy rano ary manafoana ny valaka ary soloina tsikelikely ireo tasy solika. Ireo tasy menaka miparitaka amin'ny faritra matevina dia mihorona tsikelikely ho solika (mitombo tsikelikely ny zoro fifandraisana, miova manomboka amin'ny mando amin'ny tsy mando).
4. fanaparitahana fampiatoana
Ny fizotry ny fanaparitahana ireo solida tsy simba ao anaty vahaolana misy potika kely dia kely hananganana fampiatoana dia antsoina hoe fanaparitahana. Ilay surfactant izay mampiroborobo ny fanaparitahana ny solids sy mamorona fampiatoana azo antoka dia antsoina hoe dispersant. Raha ny marina, rehefa nohosorana emilifera sy naparitaka tao anaty vahaolana ny menaka semi-solid, dia sarotra ny manavaka raha toa ny emulsification na dispersion ny fizotrany iray, ary ny emulsifier sy dispersant matetika no zavatra iray ihany, ka ampifanaraho amin'ny tena fampiasana azy roa. Emulsifying sy manaparitaka agents.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny dispersants dia mitovy amin'ny an'ny emulsifiers amin'ny ankapobeny. Ny maha samy hafa azy dia ireo poti-solid miely amin'ny ankapobeny tsy dia miorim-paka noho ireo vongan-tany namboarina.
Ny toetran'ny entona miparitaka anaty rano dia antsoina hoe bubble. Raha misy ranoka mora mamorona horonantsary ary tsy mora vaky, dia hamokatra poabo be dia be ny ranoka rehefa kosehina. Rehefa avy namboarina ny sombin-tsolika dia nitombo be ny velaran'ny velaran-tsolika / ranon-javatra ao amin'ny rafitra ka mahatonga ny rafitra tsy milamina, ka mora vaky ny sombin-javatra. Rehefa ampidirina amin'ny vahaolana ny surfactant, ny molekiola surfactant dia voapetraka amin'ny atin'ny gazy / ranoka, izay tsy mampihena ny fihenjanana eo anelanelan'ny dingana entona / ranoka fotsiny, fa koa mamorona sarimihetsika monomolecular manana tanjaka mekanika iray hanaovana ilay foam sarotra vaky.
Ny vahaolana an-dranomasina Surfactant dia manana ny ambaratongam-vokany miovaova be. Amin'ny ankapobeny, ny surfionantion anionika dia manana fananana mihosotra mahery, raha ny surfion nonionika kosa dia manana fananana mihosotra malemy kokoa, indrindra rehefa ampiasaina ambonin'ilay rahona rahona.
Satria ny valin'ny velarana dia misy fiantraikany mahery amin'ny adsorption amin'ny loto, nohamafisina ny faharetan'ny fanasana, ary afaka misoroka ny loto tsy hipetraka eo ambonin'ilay zavatra koa izy. Noho izany dia mieritreritra foana ny olona fa ny deterner misy fananana mametaka tsara dia manana fahaizana mandoto tanteraka. Noho izany dia maro ny detertera misy rano no hampihena ny tsindry paompy jet ary tsy mahomby amin'ny fanasan-damba. Noho izany dia tokony ampiasaina amin'ity tranga ity ny karazan'olon-ionic tsy misy iôna ambany. Surfactant.
Ny solubilization dia manondro ny vokatry ny surfactants mba hampitomboana ny famahanana ireo zavatra tsy mety levona na tsy mety simba ao anaty rano. Ohatra, ny solubility of benzene ao anaty rano dia 0,09% (sombin-volume). Raha ampiana surfactants (toy ny sodium oleate) dia azo ampitomboina 10% ny solubility an'ny benzene.
Ny vokatry ny solubilization dia tsy azo sarahina amin'ireo micelles namboarin'ireo surfactants anaty rano. Ny mikela dia mikela namboarin'ireo gadra hydrocarbon ao amin'ny molekiola surfactant izay miara-miasa akaiky ao amin'ny vahaolana aqueous noho ny fifangaroan'ny hydrophobic. Ny ao anaty ny micelle dia tena hydrocarbon ranoka, noho izany ny solutika biolojika tsy misy polar toy ny benzène sy ny menaka mineraly izay tsy mety ritra ao anaty rano no mora levona ao anaty micelle. Ny solubilization dia ny dingan'ny micelles manaparitaka akora lipofilika. Vokatry ny surfactants manokana io. Noho izany, raha tsy ny fifantohana surfactant ao anaty vahaolana no mihoatra ny fifantohana micelle mitsikera, dia misy micelles lehibe kokoa ao anaty vahaolana. Ny solubilization dia tsy misy raha tsy rehefa tonga ny fotoana, ary arakaraky ny halehiben'ny haben'ny micelle dia vao mainka lehibe kokoa ny solubilization.
Ny solubilization dia tsy mitovy amin'ny emulsification. Ny emulsification dia rafitra dingana tsy miato sy tsy marin-toerana azo tamin'ny alàlan'ny fanaparitahana dingana misy rano ao anaty rano (na dingana hafa misy ranoka), raha ny valin'ny solubilization dia miteraka ilay vahaolana voarindra sy ireo singa voarindra ao anaty rafitra iray mitovy homogeneous sy stable ao anaty iray dingana. Indraindray ilay surfactant iray ihany dia samy manana ny emulsification sy ny solubilization effects, fa raha tsy mihoatra ny konsentration micelle kritika vao misy effets solubilization.
7. malefaka sy malama
Rehefa ampifanarahina amin'ny velaran'ny lamba ny molekiola surfactant dia azo ahena ny coefficient ny tsikombakomban'ny tsivalana amin'ny lamba. Toy ny linear alkyl polyol polyoxyethylene etera, asidra alkyl fatty asidra polyoxyethylene ether ary surfactants nonionika ary surfactants cationic isan-karazany dia misy ny fihenan'ny coefficient ny tsikombakomba amin'ny lamba, noho izany dia azo ampiasaina ampiasaina ho fanalefahana lamba. Ireo mpandeha an-dranomasina miaraka amina alilà branched na vondrona manitra dia tsy afaka mamorona lamina fitarihana madio eo ambonin'ny lamba, noho izany dia tsy mety ampiasaina ho fanalefahana izy ireo.
Ny surfactants anionika ary ny surfactant cationic amonium quaternary dia mora mitroka rano ary mamorona sosona vahaolana mitarika eo ambonin'ny lamba, noho izany dia misy ny vokatra antistatika ary ampiasaina ho mpitsabo antistatika ho an'ny lamba fibre simika.9. vokatry ny bakteria
Ny bakteria amonium amnoma dia manana ny fitambaran'ny ionic. Mora levona anaty rano izy ireo fa tsy amin'ny solvents tsy polar, ary manana toetra simika miorina. Ny fomba fiasan'ity karazana bakteria ity dia amin'ny alàlan'ny herin'ny elektrostatika, ny fifamatorana hidrôzenina ary ny fifamatorana hidrôpôbika eo amin'ny molekiola surfactant sy ny molekiola proteinina, sns., Mba hamoahana bakteria voafitaka ratsy ary mahatonga azy ireo hiangona eo amin'ny rindrin'ny sela, miteraka lysis sy famokarana. . Ny voka-dratsy ateraky ny efi-trano dia mahatonga ny fitomboan'ny bakteria ho voasakana sy ny fahafatesana. Mandritra izany fotoana izany, ny vondrona alkil hydrophobic dia afaka mifandray ihany koa amin'ny vondrona bakteria hydrophilic hanovana ny fibobohana ny membrane, ary avy eo dia miaina lysis, manimba ny firafitry ny sela ary miteraka famafana sy fahafatesan'ny sela. Ity karazana fungicides ity dia manana fahombiazana avo lenta, poizina ambany, tsy misy fanangonana, poizina antonony ho an'ny trondro, tsy mora voan'ny fiovan'ny pH, mora ampiasaina, misy vokany mivaingana mahery amin'ny soson-tsiranoka, ary manana toetra simika miorina, fanaparitahana ary fanakanana ny harafesina Fiasa tsara sy toetra hafa.
Hatramin'ny nahitana ny vokatry ny bakteria ny surfactants kationika tamin'ny 1935, dia namokatra hatreto ny vokatra bakteria famonoana amonioma 4 ka hatramin'ny 6. Ny taranaka voalohany dia alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, cetyl trimethyl ammonium chloride, sns. ny taranaka faharoa dia ny derivative an'ny taranaka voalohany, izay tanterahina amin'ny peratra benzene na azota amnaterateraky ny sira amonium quaternary azo tamin'ny valin'ny fanoloana: ny vokatra fahatelo dia dialkyl dimethyl ammonium chloride, toy ny didecyl dimethyl ammonium chloride, sns. ny taranaka fahefatra dia vokatra mitambatra amin'ny taranaka voalohany sy fahatelo; Nosoloina toy ny sira amonium quaternary roa toy ny: ethylene bis (dodecyl dimethyl ammonium bromide), dia an'ny surfiniana gemini na karazana dimer izy ireo.
Ny famonoana bakteria amonioma quaternary dia tsy vitan'ny bakteria fa misy vokany mahery amin'ny famotehana ilay fotaka. Izy io dia afaka mamono ireo bakteria mampihena sulfate izay maniry ao ambanin'ilay fotaka. Izy io koa dia misy fiantraikany manakana ny harafesina sy synergistic raha ampiasaina amin'ny maso hafa. Ny mahazatra dia 1227 (dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride), 1231 (dodecyl trimethyl ammonium chloride), dodecyl dimethyl benzyl ammonium bromide, 1427 (efatra ambin'ny folo Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride), dodecyl dimethyl ammonium bromide, tetradecyl dimethyl ammonium bromide, tetradecyl dimethyl etc.